Alison Moritsugu waxay na tusaysaa jirkeeda geedka rinjiga ah | Abuurista khadka tooska ah
Qaybtani farshaxanka ama hal-abuurka waxay ku ciyaareysaa wax aad muhiim u ah sida isticmaalka mid ka mid ah qoryaha laga soo gooyay geed qalalan si loo gudbiyo muuqaalka cagaaran ee isla geedku qayb uga noqon karo jiqda cagaaran ee la rinjiyeeyay.
Mid ka mid ah tayada ka shaqeynta dhinaca geedka alwaax waa sida uu u furmo, isagoo u siinaya galkaas kuu ogolaanaya inaad sameyso saameyn wax la yaab leh oo qaas ah sida haddii furitaanka geedka laftiisu kaqeyb qaatay naqshadiisa. Muuqaal uu sawiray farshaxanka Alison Moritsugu oo na geynaya meelo kale oo aan ka ogaan karno shiraacyo kale oo aan ku muujin karno nafteena haddii aan leenahay xirfadda rinjiyeynta.
Iyadoo leh xoogaa dareen mugdi ah si loo isticmaalo mid ka mid ah kuwaas geedaha dhacay si ay quruxda u soo saaraan muuqaal ah halka geedahaasi yihiin halyeeyada dhabta ah ee cagaarkaas iyo dabeecadda ku jirta weynaanteeda, shiraacda loo isticmaalo sida alwaaxda ayaa ah qayb hal-abuur ah oo lagu muujiyo.
Jannadaas dhulka ku jirta ee qaabkaas sawir leh lagu xusuusto waagii jacaylka halkaasoo ubaxyadu ay ku yeesheen midabyo badan oo cagaar ah, laakiin raadinaya macnahaas wax aan ka gaari karno marka waxa dhabta ahi yahay inaan indhaheenna hortooda ku aragno.
Farshaxanka laftiisa: «Sawiradayda qormada, waxaan ku baaraya muuqaalka muuqaalka ee la rinjiyeeyay qarniyadii XNUMXaad iyo XNUMXaad. Muuqaalladaas, oo ay sameeyeen farshaxanno sida Albert Bierstadt iyo Kaniisadda Frederic Edwin, ayaa si qoto dheer ugu xididoobay dhismayaasha siyaasadeed ee xilligooda, waxay muujiyeen Dunida inay tahay suurtagal Eden. Waxaan sawiradan ka qaadaa duruufaha qoyskooda, waxaanan si toos ah ugu rinjiyaa alwaax alwaax leh oo jilifku dhaw yahay. Dareenka nostalgia ama dabaaldeggu wuxuu ku hareeraysan yahay caddaynta burburka.»
Waxaad leedahay tiisii bogga internetka iyo a bandhig muujinaya shaqadaada aad ugu dhakhsaha badan magaalada New York.
Qoryaha dhexdiisa waxaan ku leenahay shaqada xardhashada Peter demetz.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Muuqaal muuqaal ah oo lagu sawiray alwaax alwaax ah by Alison Moritsugu
Naqshadeynta Naqshadeynta Aitor Hernández dijo
Ku jawaab Aitor Hernández Naqshadeynta Naqshadeynta
George Maldonado dijo
Wanaagsan waxaan ku rinjiyeeyaa baalasha shimbiraha laakiin waan jeclahay farshaxankan; Rinjiga aad isticmaasho maxaan rabaa?
Jawaab Jorge Maldonado
Noocyada usbuuca, noocyada qoraalada